အကောင်းဆုံးဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်များ Absolut ခရီးသွားခြင်း
အကောင်းဆုံး Bollywood မင်းသမီး
Isabel | | အိႏၵိယ
ဘောလီးဝုဒ်သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်တည်ရှိပြီးဘာသာစကားမှာဟိန္ဒူဘာသာဖြစ်သောအိန္ဒိယရှိရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကို ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစကားလုံးသည်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်တွင်တည်ရှိသောအမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံ၏မက္ကဆီကန်ဖြစ်သောဘုံဘေနှင့်ဟောလိဝုဒ်အကြားရောနှောမှုမှလာသည်။
ဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်များသည်ကမ္ဘာ၏ကျော်ကြားလှသည့်သူတို့၏အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောဂီတနံပါတ်များဖြစ်ပြီးအနုပညာရှင်များသည်အနောက်တိုင်းပေါ့ပ်များနှင့်ရောနှောထားသောရိုးရာဂီတကိုကခုန်သောကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ကြီးမားသောစွမ်းရည်နှင့်အလှအပကိုစုစည်းပေးသောသရုပ်ဆောင်များနှင့်မင်းသမီးများသာမကသန်းပေါင်းများစွာသောနောက်လိုက်များနှင့်သူတို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းနှင့်နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။
ဤအခါသမယတွင် ကျွန်တော်တို့ဟာဘောလီးဝုဒ်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးမင်းသမီးအချို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါတယ် အများအပြားရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြပါပြီ။ ဘယ်သူတွေအကျော်ကြားဆုံးလဲ
3 Priyanka Chopra က
Aishwarya Rai သည်အိန္ဒိယတွင်သြဇာအရှိဆုံးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင်အကြီးမြတ်ဆုံးဂုဏ်အသရေနှင့်ပြည့်စုံသည်။ အခြားသောအိန္ဒိယမင်းသမီးများကဲ့သို့ရိုင်းသည်လည်းစံပြပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် Miss World သရဖူဆောင်းခဲ့သည်။
နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရုပ်ရှင်ရုံသည်သူမအားသတိပြုမိခဲ့ပြီး ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်သူမအားပွဲထုတ်ခဲ့သည်။ သူသည်အိန္ဒိယထုတ်လုပ်မှုများတွင်မကြာခဏပါ ၀ င်ခဲ့ပြီး (၁၉၉၉) Hum Dil De Chuke Sanam ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များအတွက်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီမှဆုများစွာကိုရရှိခဲ့သည်။ Salman Khan နှင့် "Devdas" (၂၀၀၂) တွင်သူသည်ထင်ရှားကျော်ကြားသော Shahrukh Khan နှင့်အတူ။
နိုင်ငံတကာမှအိန္ဒိယမင်းသမီး Aishwarya Rai သည်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရုပ်ရှင်များစွာတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူမ၏ပထမဆုံးပြည်ပရုပ်ရှင်သည် "Weddings and Prejudices" (၂၀၀၄)၊ Jane Austen ၏စာပေဂန္ထဝင်ဖြစ်သော "မာနနှင့်တရားစီရင်ခြင်း" ကိုပြောင်မြောက်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်ဗြိတိန်သရုပ်ဆောင် Colin Firth နှင့်အတူ The Last Legion ဇာတ်ကား (၂၀၀၇) တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူ၏ပန်းချီကားများကိုပြည်ပတွင်အကျော်ကြားဆုံးပန်းချီကားမှာ "ပန်းရောင် Panther 2007" (၂၀၀၉)၊ "ပန်းရောင် Panther" ဇာတ်ကား၏နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဟောလိဝုဒ်သို့အပြီးသတ်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်အိန္ဒိယမင်းသမီးသည်သူမ၏နိုင်ငံတွင်အလုပ်ပြန်လုပ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်သူမကွဲပြားခြားနားသောဖက်ရှင်နှင့်အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ကြော်ငြာမော်ဒယ်အဖြစ်မြောက်မြားစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြုတော်မူပြီ။။ သူမသည်ဘောလီးဝုဒ်၏မိဖုရားအဖြစ်သရဖူဆောင်းသည့်ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းအဖုံးများစွာတွင်လည်းပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
ပုံရိပ် အိန္ဒိယကို Outlook
အိန္ဒိယနွယ်ဖွားဒိန်းမတ်မင်းသမီးသည်ယနေ့ဘောလီးဝုဒ်တွင်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး Instagram တွင်နောက်လိုက် ၅၆.၂ သန်းဖြင့်အစွဲပြုဆုံးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သူသည်မော်ဒယ်လ်အဖြစ်ကြာမြင့်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ရုပ်ရှင်ရုံသို့မ ၀ င်နိုင်ခဲ့ပါ အိန္ဒိယမှာနာမည်အကြီးဆုံးစီးပွားဖြစ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေအတွက်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတွေ။ သူမသည်ချက်ချင်းပင်တိုင်းပြည်၏လတ်ဆတ်ဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးမျက်နှာများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးမကြာမီတွင်ထင်ရှားသောလက် ၀ တ်ရတနာနှင့်အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏သံအမတ်ကြီးအဖြစ်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ရှင်လောကသို့ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။
Himesh Reshammy ၏ "Naam Hai Tera" အတွက်ဂီတဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးပြီးနောက်ဒါရိုက်တာများကသူမအပေါ်အာရုံစိုက်ပြီးရုပ်ရှင်ချက်ချင်းပြရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရသည်။ Deepika သည်ဤလုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံများစွာမရှိခဲ့သော်လည်း သူ့ကိုယ်သူတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်ပြီးသရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီတွင်ကင်မရာများ၏ရှေ့မှောက်၌သူမ၏စွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်သင်တန်းများတက်ခဲ့သည်.
သူမသည်အချစ်ဟာသ "Aishwarya" (၂၀၀၆) တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမင်းသမီးသည်ပြည်တွင်း box Office ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည်ဘောလီးဝုဒ်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုရရှိခဲ့သည့်နောက်ရုပ်ရှင်တစ်ခု "When One Life Is Little" (၂၀၀၇) ဖြစ်သည်။ သူမအတွက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအတွက်သူသည်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဆု၏ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုအတွက်ပထမဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူသည်ရုပ်ရှင်အချို့နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိဘဲ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Sadij Khan ၏ "Housefull" ဟာသနှင့်သူ၏တံခါးကိုထပ်မံခုံမလွဲမချင်းရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Deepika သည်မင်းသမီး Priyanka Chopra နှင့်အတူ“ Bajirao and Mastani” သမိုင်းဝင်ပြဇာတ်တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ရုပ်ရှင်ကားသည်စတုတ္ထမြောက်အမြင့်ဆုံးအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဖြစ်လာသည်။
နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်မင်းသမီးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ဟောလိဝုဒ်တွင် "သုံး X: ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကြီးစိုးမှု" ရုပ်ရှင်တွင်သူမပါဝင်ခဲ့သည့် Vin Diesel နှင့်အတူပြသခဲ့သည်။
Priyanka Chopra က
ပုံရိပ် Vogue မက္ကဆီကိုရွိုင်းရိုချလင်
Priyanka Chopra သည်ဘောလီးဝုဒ်တွင်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီကအကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ သူသည်အမေရိကန်စီးရီး "Quantico" (၂၀၁၅) နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျော်ကြားမှုသို့တက်ခဲ့သည်သူမဟာ FBI အေးဂျင့်တ ဦး ဖြစ်သည့် Grand Central ဘူတာတွင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု၏စာရေးသူကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရမည့်နေရာတွင်သံသယများရှိနေပြီးသူမအပေါ်လွှမ်းမိုးနေသည်။ ဟောလိဝုဒ်တွင်သူသည် "Baywatch: Los Vigilantes De La Playa" (2017), "Superniños" (2020) နှင့် "Tigre Blanco" (2021) ကဲ့သို့သောအခြားရုပ်ရှင်များကိုလည်းရိုက်ကူးခဲ့သည်။
သို့သော်သူသည်ယခင်ကဘော (လ်) ဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်များတွင်“ Don” (၂၀၀၆) ကဲ့သို့သောပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Shah Rukh Khan နှင့်တွဲဖက်ကြယ်ပွင့်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ "Krrish" (၂၀၀၆)၊ Hrithik Roshan နှင့်စူပါဟီးရိုးဇာတ်လမ်း၊ “ ဖက်ရှင်” (၂၀၀၈)၊ မော်ဒယ်လ်နှင့်ဖက်ရှင်လောကတွင်ရိုက်ထားသောရုပ်ရှင်၊ “ Kaminey” (၂၀၀၉)၊ သရုပ်ဆောင် Shahid Kapoor နှင့်အတူလုပ်ထားသောရုပ်ရှင်။ "Barfi!" Manipur မှဒီအိုလံပစ်လက်ဝှေ့သမားအကြောင်းအတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင် (၂၀၁၂)၊ “ Gunday” (၂၀၁၄) သို့မဟုတ်“ Mary Kom” (၂၀၁၄) ။
Priyanka Chopra သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်အလှမယ် Miss World ဆုကိုရရှိခဲ့သောကြောင့်လူသိများသောမော်ဒယ်လည်းဖြစ်သည်ဒီလူကြိုက်များလှတဲ့အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရသူအဖြစ်ကြေငြာခံရဖို့ပဉ္စမအိန္ဒိယစံပြဖြစ်ခြင်း။
သူသည်လက်ရှိတွင်သူ၏အကြွေးများစွာအတွက်ဆုများစွာရှိပြီး Instagram တွင်သူ၌နောက်လိုက် ၆၂.၉ သန်းရှိသည်။
မင်းသမီး Kareena Kapoor သည်အနုပညာရှင်မိသားစုမှဆင်းသက်လာသည် (သူ့အဘိုး၊ ဖခင်နှင့်အစ်မတို့သည်လည်းသရုပ်ဆောင်သူများဖြစ်သည်) ထို့ကြောင့်ပင်စွမ်းရည်သည်သူ၏သွေးပြန်ကြောများသို့ဖြတ်သန်းသွားသည်။
သူသည်အလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်ကကင်မရာများ၏ရှေ့တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ပတ်သက်၍ သူမသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်“ Refugee” ရုပ်ရှင်နှင့်အတူလူသိများခဲ့ပြီးလူထုနှင့်အထူးပြုမီဒီယာနှစ်ခုလုံး၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များကိုရရှိခဲ့ပြီးသူမ၏ပထမဆုံးသောအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးပွဲ ဦး ထွက်ဖျော်ဖြေမှုအတွက် Filmfare ဖြစ်သည်။
နောက်နှစ်တွင်သူသည်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်တွင်အိန္ဒိယတွင်စုစုပေါင်းဝင်ငွေအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်သည့် "Kabhi Khushi Kabhie Gham" ရုပ်ရှင်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
နောက်နှစ်များတွင်အချို့သောအခန်းကဏ္ in များတွင် ၀ င်ရောက်စီးနင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်မင်းသမီးသည်ပိုမိုလိုအပ်သောအခန်းကဏ္ to များကိုလက်ခံရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ "Chameli" (၂၀၀၄) တွင်ပြည့်တန်ဆာအဖြစ်ကစားခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်များတွင်သူမသည်အကောင်းဆုံးအထူးဖျော်ဖြေမှုအတွက်ဒုတိယမြောက် Filmfare Award ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး "Dev" (၂၀၀၄) နှင့် "Omkara" (၂၀၀၆) ဇာတ်ကားများတွင်လည်းရရှိခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးမင်းသမီးအတွက်ဝေဖန်မှုဆုများ။
Imtiaz Ali မှရိုက်ကူးသော Jab We Met ဟာသ (၂၀၀၇) သည် Kapoor အား Filmfare အတွက်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သူမသည်ရှည်လျားပြီးအောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုရရှိခဲ့ပြီးလူထု၏ချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် Instagram ရှိနောက်လိုက် ၆ သန်းကျော်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးခေတ်ပြိုင်ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံရိပ် Vogue အိန္ဒိယ
Bipasha Basu သည်အိန္ဒိယတွင်အမြင့်ဆုံးသောမင်းသမီးဖြစ်သည် သူမ၏စွမ်းရည်နှင့်အလှအပတို့နှင့်အတူ၎င်း၏နယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်ကျော်ဖို့စီမံခန့်ခွဲတဲ့သူစစ်မှန်တဲ့အိန္ဒိယ celluloid Diva ။ သူ၌ Instagram ၌နောက်လိုက် ၉ သန်းနီးပါးရှိသည်။
အခြားထိပ်တန်းဘောလီးဝုဒ်မှမင်းသမီးများကဲ့သို့ Bipasha သည်ဖက်ရှင်လောကသို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းများလှမ်းခဲ့ပြီး ၁၇ နှစ်အရွယ်၌ပင်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ တွင် Cinthol Godrej ၏ Supermodel နှင့်ကျော်ကြားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Ford supermodel ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုသူရရှိခဲ့သည်။ သူမသည် Ford အေဂျင်စီကိုလက်မှတ်ရေးထိုးစဉ်ကသူမသည်နယူးယောက်၌စံပြအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းအဖုံး ၄၀ ကျော်တွင်ပေါ်လာရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
မင်းသမီးအနေဖြင့်သူမသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် Ajnabee ရုပ်ရှင်နှင့်အတူသူမသည်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးပွဲ ဦး ထွက်ဆုအတွက် Filmfare ဆုရရှိခဲ့သည်။ နောက်တစ်နှစ်အကြာတွင် Raaz ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့်ပထမဆုံးစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးမင်းသမီးအမျိုးအစားတွင် Filmfare ဆုအတွက်လျာထားခြင်းခံရသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်အိန္ဒိယရှိအခြားဝင်ငွေအများဆုံးရုပ်ရှင်များတွင်“ No Entry” (၂၀၀၅)၊ “ Phir Hera Pheri” (၂၀၀၆) နှင့်“ All the Best: Fun Begins” (၂၀၀၉) ကဲ့သို့သောအခြားရုပ်ရှင်များတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
ထိုနှစ်များအတွင်းသူသည် Aatma (၂၀၁၃)၊ Creature 2013D (၂၀၁၄) နှင့် Alone (၂၀၁၅) နှင့်ရင်ခုန်စရာဟာသ Bachna Ae Haseeno (3) တွင်သူ၏ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်များစွာချီးမွမ်းခံခဲ့ရသည်။ ဘောလီးဝုဒ်ရှိသူ၏နောက်ဆုံးထုတ်လက်ရာအချို့မှာ Humshakals (၂၀၁၄) နှင့် Creature (၂၀၁၄) တို့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » အကောင်းဆုံး Bollywood မင်းသမီး
ဟုတ်တယ် Aishwaria ဟာတော်တော်လှတယ်၊ ငါကြားခဲ့ပေမယ့် Kajol ကတော့အလှဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး Indu မင်းသမီးပဲ။
ကောင်းပြီ Aishwaria ဟာချစ်စရာကောင်းပေမယ့် Kajol ကပိုပြီးလှတယ်၊
Kajol ကမင်းကိုကျော်လွန်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်မင်းသာသာသာသာဆိုရင်မင်းကိုမွေးဖွားစရာမလိုဘူးဟက်တာ၊ ဟာသဉာဏ်တစ်ခုလို့မင်းတို့မထင်ဘူးလား
kajol rosebush ၏အလှဆုံးနှင်းဆီ
ငါဘယ်သူ့ကိုမှအရည်အချင်းမပြည့်မှီဘူး၊ မနှိုင်းယှဉ်ချင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှိုင်းယှဉ်မှုမရှိနိုင်လို့ပါ။ Kajol ဟာမင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့အထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကစားနိုင်တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးကိုယုံကြည်စိတ်ချရအောင်လုပ်ပေးတဲ့အပြင်သူမဟာသွေးသားအသားအရောင်နဲ့လှပတယ်။
kajol ကငါ့အတွက်ကောင်းတယ်ဟိန္ဒူရုပ်ရှင်ရုံရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမင်းကငါ့အကြိုက်ဆုံး ok ပါ။ ထူပြီးပါးလွှာသော tkm kajol ကိုသူမချစ်သောရုပ်ရှင်ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။
Aishwarya Rai သည်အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံလုံး၌ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်
kajol ၏စွမ်းရည်နှင့်သူ၏လှပမှုသည်၎င်းထက်ကျော်လွန်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်နားလည်ထားသောကျွန်ုပ်၏ကမ္ဘာထက်မည်သူမျှနှိုင်းယှဉ်စရာအကြောင်းမရှိပါ။
MARISABEL ARACA ဟုသူကပြောသည်
KAJOL အရှိဆုံးဖြတ်တောက်မှု .............. SIIIIIIII ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း
MARISABEL ARACA အားပြန်ပြောပါ
KAJOL သည်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးရှယ်ရခါကိုလည်းကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံးချစ်မြတ်နိုးသည်။
လူတိုင်းသိပြီးလက်ခံကြပါစို့ ... အကယ်၍ Kajol သာလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ...
kajol နှင့် sharukan ရုပ်ရှင်တို့သည်လှပသောဇနီးမောင်နှံဖြစ်စေရန်အလွန်လှပသည်
မင်းသမီးတွေရဲ့အလှဆုံးကတော့ kareena kapoor, aishwarya rai, kajol
ငါတကယ် Kajol ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ သူတို့လည်း SRK နဲ့အတူတူတွဲလုပ်ကြတယ်
အရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါဟာဟိန္ဒူရုပ်ရှင်ရုံကိုလည်းချစ်တယ်။ လူတိုင်းကိုလက်တွေ့ကျကျလေးစားမိတယ်
Lady Karol ဟုသူကပြောသည်
kajol သည်အလှအပအရှိဆုံးဖြစ်သည် ။aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
lady karol အားပြန်ပြောပါ
Kajol ဟာအရမ်းလှတယ်၊ မင်းသမီးကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ ရယ်စရာကောင်းတယ်။ သူမကအရမ်းပျော်တယ်။ သူမကအကောင်းဆုံးပါ။
Erika GUSMAN ဟုသူကပြောသည်
Linda KAJOL အမြင့်ဆုံး
ERIKA GUSMAN ကိုစာပြန်ပါ
ကာရန် GUSMAN RAMOS ဟုသူကပြောသည်
မင်းဟာမင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဟိန္ဒူရုပ်ရှင်ရုံရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်ပြီးမင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရစေတဲ့ရိုးရှင်းပြီးသင်နဲ့ SHARUKH နဲ့အတူရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးတယ်… SO KAJOL …သူတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ကြပေမယ့်သင်ဟာလက်ထပ်ထားပြီ…
KAREN GUSMAN RAMOS သို့စာပြန်ပါ
လူအများကပြောတာကမင်းဟာအလှဆုံးလို့လူတွေကမင်းရဲ့အပြင်ပန်းအလှကိုမြင်လို့မဝှက်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်းကလူတစ်ယောက်လိုဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားတယ်။ အရေးကြီးတာကအပြင်ဘက်ခြမ်းကိုချစ်ဖို့မကောင်းဘူး။ သငျသညျခံစားမှုနှင့်အတူပြုပါကတည်းကသင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးမင်းသမီး, သရုပ်ဆောင်အများစုမေ့လျော့ပြီးပြီကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ... ကောင်းစွာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမစ္စစ် Kajol Devgan အောင်မြင်မှုများစွာနှင့်သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှကြည်ညိုလေးစားသောသူများနှင့်ဤသစ္စာရှိရှိလေးစားသောသူများအားလုံး၏အထက်တွင် ... ငါပီရူးနိုင်ငံသို့လာရောက်နိုင်သောကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိနိုင်မည့်ထိုနေ့ကိုမျှော်လင့်သည်။ ငါနင့်အနားမှာ ၁ မိနစ်သာရောက်ဖို့ဘာမှမလုပ်ဘူး .. နင်ငါ့ကိုဒီနေ့စာတစ်စောင်ဖတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ atte miki ကိုဂရုစိုက်ပါ။
Eliama gaviota ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်ပါတယ်၊ အရမ်းလှတယ်၊ လမ်းခရီးမှာငါဟာဟိန္ဒူရုပ်ရှင်ရုံကိုအရမ်းဝါသနာပါသူပါ။ SRK, Roshan, Salman တို့လိုမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ Kajol, Ash, Preity, Rani စတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကိုမျှော်လင့်နေပါတယ် တကယ်တော့ငါဟာငါသိပြီးသိသမျှအားလုံးရဲ့သရုပ်ဆောင်တွေ၊
အားလုံးတစ် ဦး ကပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရစ်စမတ်ဖက်
Eliama Gaviota အားပြန်ကြားပါ
ငါသူတို့ Kahol မြင်သည်ကိုငါမသိပေမယ့်တ ဦး တည်းအရာလွဲချော်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ခြင်းနှင့်အခြားအမှုအရာတို့တွင်စံပြနှင့်အခြားအရာသူတို့ကကြိုက်တယ်သောကွောငျ့ဖွ
ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့နှင့်အများစုနှင့်အဘို့နှင့်ဓာတ်ပုံများနှင့်အခြားနှိုင်းယှဉ်လျှင်မသာလျှင် aishwarya rai ဖြစ်သည်
Aswaira ဟာ asQo ပါ။ 100% KAJOL .. နှင့် zi stuviera RANI အားလုံးအနိုင်ရလိမ့်မည်။
ဟဲလို၊ ငါဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံမှ KAJOL အတွက်အလှအပဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံး Atris AIS ကြောင့် AIS သည်ဒါ့အပြင်၎င်းသည်အလွန်အမင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းထားခြင်းနှင့် KOQUETA SIIIIIIIIII အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှမရှိလျှင်၎င်းသည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါ စစ်မှန်တဲ့အမှန်တရား
အိုးဟုတ်ကဲ့ ps နှင့်စကားမစပ် kajol shahrukh khank နှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောစုံတွဲစေသည်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ; Kajol ဟာသူမရဲ့လှပမှုကြောင့်သာမကသူမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့အရည်အသွေးကြောင့်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူမ၏အပြုအမူနှင့် induction cinema တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဂီတများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်။
Maria Grace အားပြန်ပြောပါ
အလှဆုံးကတော့ kajo ဖြစ်တယ်။ Ray ကချစ်စရာကောင်းပေမယ့်သူမမှာခန္ဓာကိုယ်မရှိဘူး၊ သူကတုတ်နဲ့တူပေမဲ့ kajol ကနတ်သမီးနတ်သမီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြီးပြည့်စုံတယ်။
ကောင်းတဲ့ kajol ဟာလှပပြီးမင်းသမီးကောင်းတစ်ယောက်ပါ
အကောင်းဆုံးမင်းသား SHARUKHAN ဖြစ်ကြပြီး KAJOL သူတို့သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်
MARI MAR ကိုစာပြန်ပါ
အထူးသဖြင့်သင်၏မျက်လုံးများဘုရားသခင်သည်အကောင်းဆုံးနှင့်အထိခိုက်လွယ်ဆုံးဖြစ်သော KAJOL၊ သင့်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
herlinda အလင်း ဟုသူကပြောသည်
ကျနော့်အတွက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပါရမီရှိပေမယ့်အကောင်းဆုံးကတော့ kajol ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့သူမရဲ့မျက်နှာပဲ
luz herlinda အားပြန်ကြားပါ
kajol နဲ့ sharukhan တို့လိုသရုပ်ဆောင်ကောင်းတွေရှိတာအရမ်းကောင်းတယ်
ငါ့ရဲ့ kajol အတွက်မင်းသမီးတစ် ဦး ရဲ့မျက်နှာသလောက်အကောင်းဆုံးလှပေသည်။ သူမရုပ်ရှင်တွေကိုကြိုက်တယ်
maria gomez သို့ပြန်သွားရန်
Lucero Martin ဟုသူကပြောသည်
lucero martin အားစာပြန်ပါ
သူမသွားသောနေရာတိုင်းတွင်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်သူမ၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်အထူးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိန်းမဖြစ်လျှင်လှပပြီးအသိဉာဏ်ရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဤကမ္ဘာသို့ပို့ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ သင်ဟာလှပတင့်တယ်နေဆဲပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏နံပါတ် ၁ ပရိတ်သတ်များ၊ အနမ်းများပါ
hl နာမည်ကစာရာဖြစ်ပြီးငါ့အတွက်အားလုံးအတွက် acrisaz အားလုံးသည်လှပပြီးကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောရုပ်ရှင်ကားများကိုနှစ်သက်ကြသည်
Aris OCHOA ဟုသူကပြောသည်
အကောင်းဆုံးသောအကောင်းဆုံးကစားနည်းသည်ကာဂျယ်လ်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အပြည့်အစုံပါ ၀ င်သော ၀ င်ရောက်နိုင်မှုနှင့်အားလုံး၏အလှပဆုံး၊ ကျွန်ုပ်သည်ဟိန္ဒူရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်သင်တန်း၏ကဲ့သို့သောအကန့်အသတ်ဖြင့်သာမမြင်ခဲ့ဖူးပါ၊ စုံတွဲ။
ARIS OCHOA သို့ပြန်သွားပါ
ဂျွန် velarde ဟုသူကပြောသည်
ပီရူးမှ Kajol သည်အလှဆုံးနှင့်ပြည့်စုံသော Indu ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်သည်။
john velarde အားပြန်ပြောပါ
ဒီနေ့ PYAAR TO HONA HI THA ကိုတွေ့ပြီ၊ Kajol နှင့် Ajay တို့ Kajol အကြောင်းဘာပြောရမှန်းမသိဘူး၊ သူမသည်ဖျော်ဖြေရေးတွင်ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုအမြဲပြောလေ့ရှိသည် အရမ်းလှတယ်၊ လှတယ်၊ စုံတယ်။ ငါသူမ၏ရုပ်ရှင်များစွာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သည်။ Ajay သည်အလွန်ကောင်းသောမင်းသမီးဖြစ်သည် SrKAjol၊ အခြေအတင်ပြောရလျှင်သူမ ICON DIVA REĠINA၊ ငါသံသယဖြစ်သော်လည်းအရာအားလုံးပါ ၀ င်သောမင်းသမီးတစ် ဦး ကိုရှာရန်ခက်ခဲသည် Kajol လိုမျိုးငါရုပ်ရှင်အသစ်ကိုကြည့်ဖို့သူ့ကိုပြန်လာဖို့မျှော်လင့်တယ်၊ သူမအတွက်အရမ်းလေးစားမိပါတယ်……
Iquitos-Peru မှ Kajol သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူမကသူမ၏ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးကတည်းကအနှစ် ၂၀ လုံးလုံးသူ့နောက်ကိုလိုက်နေသည်။
ရုရှားအရုပ် Matryoshka ၏သမိုင်း